Efa mandeha ny fanadihadiana: filoha teo aloha sy minisitra hotsarain’ny HCJ | NewsMada
Efa mandeha ny fanadihadiana: filoha teo aloha sy minisitra hotsarain’ny HCJ
Mba tena hiasa tokoa sy tsy hitanila ? “Misy tokoa ny fitoriana ary handray ny andraikitra izahay. Hojerena ny momba ireny fitarainana ireny ka ho hita eo ny tohiny. Antontan-taratasy efatra ny eto aminay, ahitana raharahana filohan’ny Repoblika teo aloha sy ny minisitra. Efa eo am-pandinihana izany izahay izao” hoy ny mpikambana eo anivon’ny Fitsarana avo (HCJ), natao hitsara ireo mpitondra ambony eto amin’ny firenena, omaly tetsy Anosy. Nambarany fa afaka mametraka fitoriana, na fitarainana eny anivon’ity rantsam-pitsarana ity ny fiarahamonim-pirenena, ny fikambanana, na vondron’olona samihafa.
Nanamafy izany ny minisitry ny Fitsarana, i Harimisa Noro Vololona fa hiasa avy hatrany ireo mpikambana ireo satria efa feno 20 izy ireo izao. “Hiandraikitra ny fitsarana ireo olona ambony eto amin’ny firenena, toy ny filoha na lehiben’Andrimpanjakana, na mpikamban’ny governemanta mety manao fandikan-dalana ny HCJ. Natao manokana mihitsy ny fitsarana azy ireo”, hoy izy.
Hanao ny asany, tsy misy tsindry, na kolikoly…
Manoloana izany, tsy nisalasala ny mpisolovava, ny Me Olalah nanizingizina fa tokony halalaka amin’ny fanatanterahana ny asany ny HCJ. “Efa ela ny tokony hatsangana izy ity ahafahana mitsara ireo olona ambony… Aoka anefa tsy atao resaka mandalo fa tena hanenjika ireo nanao tsy nety teto amin’ny firenena… Avelao hanao ny asany amin’ny rariny sy ny hitsiny fa tsy hisy indray ny tsindry samihafa, na kolikoly”, hoy izy.
Araka izany, andrasana ny ho tohin’ny fanadihadian’ny HCJ ny momba izany filoha teo aloha sy minisitra izany